Obere ndị agha abụọ: Ọpụrụiche dị ugbu a na gam akporo | Gam akporosis
Duru ndị agha gị ka ha nwee mmeri na Tiny Troopers 2: Special Ops
Obere Troopers 2 bụ ịga n'ihu nke nnukwu ihe ịga nke ọma nke egwuregwu vidio vidio a maara dị ka Chillingo. Ihe nkiri vidio nke ọ na-etinye anyị n'ọkwá nke iduga ìgwè ndị agha ịbanye n'ọgụ dị iche iche ma kpochapụ onye iro ọ bụla nke na-etinye anyị n'ihu anyị. Maka nke a, ọ na - agbaso ụkpụrụ nduzi ndị ahụ dị ka nke mbụ Tiny Troopers aha ya na eserese ndị dabara nke ọma na egwuregwu egwuregwu kachasị mma ka anyị wee banye ngwa ngwa ma ghara igbu oge ma ọlị.
Ka ọ were Chillingo na-achọ ihe ịga nke ọma ọzọ na Tiny Troopers 2 na oge m nwere ike igwu ụfọdụ egwuregwu dị mma, ọ na-ekwe nkwa ọtụtụ. Ọ gaghị abụ Oku nke Ọrụ maka ngwaọrụ mkpanaka mana ọ ga - enyere anyị aka ịnagide oge a na - ekpo ọkụ n'ehihie n'ehihie n'oge anwụ anyị nwere kemgbe izu ole na ole. Ma ọ bụ na obere Troopers ị ga-enweta ya n'efu na Storelọ Ahịa Play na ihe niile eji eme ya ka ọ bụrụ otu egwuregwu kachasị amasị gị n'izu ole na ole sochirinụ.
1 Ozi mgbe ozi
2 Tankị na ndị ọzọ
Ozi mgbe ozi
Obere Ndị agha 2 anyị ga-etinye ngwa ngwa mgbe ị gafere obere nkuzi iji mụta ụfọdụ iwu bụ isi Iji mara otu esi akpa agwa mgbe onye iro chọrọ iwepụ anyị na ohere izizi.
Oge anyị bidoro na ozi ndị mbụ anyị ga-elekọta ndị agha site na usoro nke ọzọ. Ebumnuche anyị bụ inye ha iwu ma gwa ha ebe anyị ga-aga ka anyị wee mata etu anyị ga-esi mee ọgbaghara ahụ dabara na njide ndị iro na mberede.
Kedu ihe dị na ya echiche dị mfe ị gafere n'ọhịa nwere obere mkpụrụedemede dị mfe, Ọ na-eme na-enwe ngwá agha na ngwá nweta nkwalite usoro rue ihe RPG. N'ezie, a gaghị enwe ọkwa dị iche iche iji nwee ike ịga n'ihu site na egwuregwu vidio na ndị agha kachasị mma na ike ịgba egbe.
Tankị na ndị ọzọ
Anyị agaghị anọ naanị n’ọchịchị ọkwa ndị agha, hazie yunifọm ha, kwalite ngwa ọgụ ha ma ọ bụ melite ume nke uwe agha ha, mana anyị ga-enwetakwa ike pụrụ iche nke ga-enye anyị ohere ịnweta ndị dọkịta, nnukwu ngwa agha, ndị na-enwu ọkụ na ọbụna tankị iji kesaa bọmbụ aka ekpe na aka nri.
Obere Troopers 2 na-anọchi maka ịdị mfe nke njikwa ya, ọdịnaya nke ga-ewe anyị awa ole na ole inyocha na maka ezigbo ọrụaka na nkọwa nke ọ bụla. Site na 3D eserese, ụda kwesịrị ekwesị maka ihe nke ọ bụla nke egbe egbe ma ọ bụ gbaa dị, na ihe ga-abụ ihe isi ike ahọpụtara nke ọma ka ọ ghara ịdị mfe ma ọ gaghị esikwa ike.
Anyị amatala otu na nke a bụ ihe dị iche n’etiti egwuregwu vidiyo na-aga nke ọma ma ọ bụ nọrọ na nke ọzọ. Nke ahụ kwuru, dị maka n'efu na Storelọ Ahịa Play na ụdị Freemium a maara nke ọma. Ekwela oge gị, ma kpọọ egwuregwu iji nwalee ya, ị gaghị enwe mmechuihu.
Obere Ndị agha 2: Ọpụrụiche Pụrụ Iche
Nke ahụ dị na span
Ihe eserese 3D gị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Duru ndị agha gị ka ha nwee mmeri na Tiny Troopers 2: Special Ops
Zaghachi Julderth Alberto
Superbike World Championship laghachi na SBK15 na ama gam akporo gị